दाताले १२ बर्षसम्म पनि दिएनन् एमयूलाई कबुल गरेको रकम – Nilo Aakash
नेकपा ( एकीकृत समाजवादी ) काे पार्टी कार्यालय उद्घाटन,
सुर्खेतमा बम विस्फोट हुदा दुई जना घाइते,
पञ्चपुरीका नगरप्रमुख थापा सहितकाे टाेली द्वारा बाढि प्रभावित क्षेत्रकाे अवलोकन,
महाकालीमा नौ दशकयताकै ठूलो बाढी,
सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरूद्ध,
बाढीले कैलालीका ५० घर डुबानमा,
बिहीबारदेखी माैसममा सुधार हुने अनुमान,
भोलिदेखि देशभरको मौसम बद्ली हुने,
जुम्लामा होटेल सञ्चालकको शव भेटियो,
दाताले १२ बर्षसम्म पनि दिएनन् एमयूलाई कबुल गरेको रकम
निलो आकाश संवाददाता ६ आश्विन २०७७, मंगलवार १४:०४
सुर्खेतमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय (एमयू) स्थापना गर्न चन्दा संकलन र महायज्ञ नै संचालन भयो । त्यही रकमको जगमा विश्वविद्यालय पनि स्थापना भयो । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि संचालन भएको महायज्ञमा दाताहरुले लाखौं रकम कबुल गरे । तर महायज्ञ संचालन भएको १२ बर्ष वित्यो । अधिकांश दाताले हालसम्म आफूले कबुल गरेको रकम विश्वविद्यालयलाई दिएका छैनन् ।
तत्कालिन समयमा रकम कबुल गरेर विभिन्न व्यक्ति, संस्था र संगठनले चर्चा र प्रशंसा पनि बटुले । तर हालसम्म पनि उनीहरुले रकम दिन भने आनाकानी गरिरहेका छन् । यो अवधिमा विश्वविद्यालयले दाताहरुलाई रकम जम्मा गरिदिन बारम्बार अनुरोध, पत्राचार र हारगुहार नै गरेको थियो । तर पनि कतिपय दाताले नसुनेझै गरेका छन् । महायज्ञको समयमा दाताले कबुल गरेको मध्य अब झण्डै तीन करोड रकम उठ्न सकेको छैन । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि भएको महाज्ञयज्ञमा २६ करोड रकम दान दिने कबुल भएको थियो । तर १२ बर्ष वितिसक्दा पनि हालसम्म तीन करोड रकम उठ्न सकेको छैन । कबुल भएको रकममध्ये झण्डै २३ करोड रकम मात्रै उठेको छ । जसमध्ये हाल मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको कुनइनेपानी जंगल मात्रै १७ करोड बराबरको हो ।
त्यस्तै दाताले कबुल गरेका रकम मध्ये हालसम्म पाँच करोड रकम मात्रै विश्वविद्यालयको मूल खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कबुल भएको २६ करोड मध्ये झण्डैं २३ करोड मात्रै रकम जम्मा छ । बाँकी तीन करोड रकम भने १२ बर्षसम्म वित्दा पनि दाताले दिएका छैनन् । विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि मौदगल्या सेवा समाजले २०६५ फागुन २७ गतेदेखि चैत ४ गतेसम्म सुर्खेतमा महायज्ञ लगाएको थियो । पाँच दिनसम्म लागेको महायज्ञमा विभिन्न संघ संगठन, संघ संस्था र व्यक्तिले गरी झण्डै २६ करोड रकम दान दिने कबुल गरेका थिए । जसमध्ये चारहजार तीनसय ७० जनाले मागदान, ३० जनाले तुलादान, २३ जनाले भूमिदान र एकहजार २० जनाले नगद दान दिने कबुल गरेका थिए । तर महायज्ञमा कुल एककरोड २४ लाख ७५ हजार नौ सय ५७ रुपैयाँ ६२ पैसा मात्रै नगद दान भएको थियो ।
संकलन भएको रकम २०६६ साल भदौ २३ गते मौदगल्या सेवा समाजले विश्वविद्यालय स्थापनार्थ बनेको मूल नेतृत्वलाई हस्तान्तरण गरि सकेको थियो । मौदगल्या सेवा समाजका संयोजक सिताराम कार्कीका अनुसार महायज्ञपछि पनि समितिले ९५ प्रतिशत रकम उठाउने अठोट लिएको थियो । तर विश्वविद्यालय स्थापनार्थ बेनेको मूल नेतृत्वले बाँकी रकम उठाउने जिम्मा लिएको थियो । जसका लागि कार्यालय नै स्थापना गरेको थियो । तर विश्वविद्यालय स्थापना भएको लामो समय वितिसक्दा विश्वविद्यालय मूल नेतृत्वले रकम उठान सकेको छैन ।
समाजका संयोजक कार्कीका अनुसार विश्वविद्यालयले रकम संकलनका लागि दातासँग पहल नगरेकै कारण कबुल भएको रकम उठ्न सकेको हो । कबुल भएको शतप्रतिशत रकम उठ्न सक्ने सम्भावना न्यून रहेको छ । ‘दाताले कबुल गरेको लामो समय भयो, विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वले परामर्श गर्न सकेन’ उनले भने, ‘अब शत प्रतिशत रकम उठाउन मुस्कील पर्छ ।’ तर मूल नेतृत्वले दातालाई खुशी बनाउन सकेको खण्डमा भने कबुल भएको रकम उठ्न सक्ने कार्कीको भनाइ छ । सुरुवातमै विश्वविद्यालयका
पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिनु, विश्वविद्यालयमा चरम राजनीति हावी हुनु र विश्वविद्यालयको मूल नेतृत्वले दातासँग समन्वय गर्न नसक्दा रकम संकलन हुन नसकेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । विश्वविद्यालय स्थापना भएको केही समयमै पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका थिए । त्यसपछि पनि राजनीतिक खिचातानीका कारण विश्वविद्यालय नेतृत्व अस्थिर बनेको थियो । पदाधिकारीबीचकै द्वन्द चरम उत्कर्षमा पुग्नु, विश्वविद्यालयलाई राजनीति गर्ने अखडा बनाउनु र शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान नदिनु जस्ता विविध कारणले दाताले कबुल गरेको रकम नदिएको हुनसक्ने कतिपयको भनाइ छ । यद्यपी अब कबुल रकम संकलन गर्नका लागि पहल थाल्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
‘दाताको रकम दुरुपयोग हुँदैन’
यता मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहले भने अब कुनै पनि हालतमा दाताले दिएको रकम दुरुपयोग हुन नदिने बताएका छन् । ‘दाताले दिएको एक÷एक रुपैयाँको हिसावकिताव खोजिन्छ, तर रकम दुरुपयोग हुन दिँदैनौं’ सिंहले भने, ‘दाताले दिएको रकम कहाँ कुन कामका प्रयोग भयो, स्पष्ट रुपमा सार्वजनिक गरिनेछ ।’ जनताले एक छाक भोकै रहेर विश्वविद्यालयलाई दिएको रकम कुनै पनि हालतमा दुरुपयोग हुन नदिने उनको अठोट छ । ‘जनताले दिएको रकम जनतालाइ नै सार्वजिक गर्छु, तर दुरुपयोग हुन दिन्न’ सिंहले भने, ‘दाताले जुन उद्देश्यका लागि रकम दिएका हुन्, त्यही उद्देश्य पुरा गर्न रकम खर्च गरिनेछ ।’ विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई सच्चाउँदै दाताकै इच्छाअनुसार विश्वविद्यालयलाई सही ढङ्गले सञ्चालन गर्ने उनको भनाइ छ । दाताको इच्छाअनुसार विश्वविद्यालयलाई सञ्चालन गर्दा आउने सक्ने जस्ता सुकै चुनौतीको सामाना गर्न तयार रहेको सिंहले बताए । उनले दातालाई कबुल गरेको रकम विश्वविद्यालयको मूल खातामा जम्मा गरिदिनसमेत आग्रह गरे ।
रकम उठाउन उपकुलपतिको सक्रियता
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि दाताबाट कबुल भएको तर उठ्न बाँकी रकम उठाउन विश्वविद्यालय नेतृत्वले संक्रियता देखाएको छ । कोरोना महामारीकैबीच विश्वविद्यालयले दातासँग तीनपटक छलफल गरिसकेको छ । विभिन्न संग संगठन, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्था र व्यक्तिगत रुपमा छुट्टाछुट्टा पछलफल चलाएको छ । छलफलमा दाताले कोरोना महामारीको अवस्था सहज हुनेवित्तिकै रकम दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अधिकांशले दशैं–तिहारपछि रकम दिने बताएका छन् । यद्यपी कबुल गर्ने सबै दाता भने छलफलमा सहभागी भएका छैनन् । यसैबीच चिङ्गाड गाउँपालिका वडा नं. ५ अवलचिङका ई. डोरप्रसाद उपाध्याय विश्वविद्यालयलाईकबुल गरेको सबै रकम विश्वविद्यालयलाई दिएका छन् । स्व.बुबा धनीराम र स्व.आमा पूर्णकला उपाध्यायको सम्झनामा विश्वविद्यालयलाई दिन कबुल गरेको सबै (५१ हजार एकसय ५१) रकम मध्ये यसअघि १५ हजार विश्वविद्यालयलाई दिएका थिए । बाँकी ३६ हजार एकसय ५१ रुपैयाँ गएको बिहीबार मात्रै उपाध्यायले विश्वविद्यालयका उपकुलपति सिंहलाई हन्तान्तरण गरेका हुन् ।
८ कार्तिक २०७८, सोमबार १९:२६
६ कार्तिक २०७८, शनिबार १७:४४
२ कार्तिक २०७८, मंगलवार १८:०९